♪ ၁၅၉,၈၀၀/- ကျပ် ၀န်းကျင်သာကျသင့်မယ့် - “KENBO Fly 2” ♫
ဟန်းဆက်များကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရာတွင်သုံးစွဲသူများရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး၊တန်ဖိုးမြင့်စမတ်ဖုန်း၊တန်ဖိုးသင့်တင့်တဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့တန်ဖိုးနိမ့် စမတ်ဖုန်းဆိုပြီးကွဲပြားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဖုန်းကုမ္ပဏီများ ဟာဝယ်ယူ သုံးစွဲမယ့်သူများအဆင်ပြေစေရန်ဟန်းဆက်အမျိုးအစားများစွာကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးထားကြပါတယ်။နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်များရဲ့ ဈေးကွက်ဟာကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝန်းဖြန့် ကြက်နိုင် သလိုတန်ဖိုးသင့်ဟန်းဆက်များကိုထုတ်လုပ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှအမှတ်တံဆိပ်များ ဟာလည်းသူ့ဈေးကွက်နဲ့ သူအခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှထွက်ရှိတဲ့အမှတ်တံဆိပ်များထဲတွင်KENBO တံဆိပ်ဟာလည်းပရိသတ်အခိုင်အမာရှိပြီးဈေးနှုန်း ချိုသာတဲ့ဟန်းဆက်များစွာကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးထားပါတယ်။Fly 2ဟာKENBO ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဟန်းဆက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းပိုင်း လည်းသင့်တင့်မျှတပါတယ်။တန်ဖိုး သက်သာပေမယ့်ဖုန်းတွင်းပိုင်းစွမ်းရည်များကတော့ကောင်းမွန်မှုရှိပါတယ်။
Fly2ရဲ့ကိုယ်ထည်ဟာကိုင်ဆောင်အသုံးပြုတဲ့အခါတွင်ပေါ့ပါးမှုရှိပြီး၊ ဖုန်းကိုယ်ထည်အနေအထားကတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်မှုရှိပါတယ်။ဖုန်းရဲ့ ထောင့်စွန်းများဟာအ၀န်းအ၀ိုက်ပုံစံရှိပြီး၊ပါဝါခလုတ်နှင့်အသံအတိုးအချဲ့ ခလုတ်ကိုတော့ဖုန်းရဲ့ဘေးဘောင်တစ်ဖက်တွင်ထည့်သွင်းပေးထားပါ တယ်။စပီကာဟာဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်အောက်ဘက်နားတွင်တည်ရှိပြီး၊ အဓိက,ကင်မရာကတော့အနောက်ဘက်အလယ်တည့်တည့်တွင်အ၀ိုင်းပုံစံပါရှိပါတယ်။ကင်မရာ၏အောက်ဘက်တွင်Flash မီးပါရှိကာFlash မီးရဲ့အောက်ဘက်မှာတော့Fingerprint Sensor ကိုအ၀ိုင်းပုံစံတပ်ဆင် ပေးထားပါတယ်။Fingerprint Sensor ရဲ့အောက်ဘက်တွင်KENBO အမှတ်တံဆိပ်ကိုတွေ့မြင်ရပါမယ်။CNC သတ္တုကိုယ်ထည်နဲ့ပုံဖော် ထားတဲ့Fly 2ဟာမျက်နှာပြင်အကျယ်အ၀န်း5.5 inchesရှိပါတယ်။အဆိုပါ မျက်နှာပြင်အကျယ်အ၀န်းဟာScreen Size ကြီးမားတဲ့ဟန်းဆက်ကို သုံးချင်သူများအတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။ရုပ်ရှင်များကြည့်တဲ့ အခါနဲ့ဂိမ်းများဆော့ကစားတဲ့အခါတွင်ရုပ်ထွက်ကြည်လင်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။အဓိက, ကင်မရာဟာ13MP, f/2.0 စွမ်းရည်ရှိတာကြောင့်ပုံထွက် ကောင်းမွန်မယ့်ဖုန်းဖြစ်ပြီး၊Arcsoft Light နည်းပညာစနစ်ပါရှိတာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါတွင်လှပကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်များကိုရရှိမှာဖြစ်ပါ တယ်။ရှေ့ကင်မရာငယ်ရဲ့စွမ်းရည်ဟာအချို့စမတ်ဖုန်းများရဲ့အဓိက, ကင်မရာစွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့8MP အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Selfieရိုက်ကူးတာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဖုန်းသုံးစွဲသများအနေနဲ့အဆင်ပြေ စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ဟန်းဆက်ဖြစ်တာကြောင့်လူအများစုအသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေစေကာဖုန်းအသုံးပြုသူရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့အတွက်လည်းFinger-print Sensor ဟာ အကောင်းမွန်ဆုံးကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။Fingerprint Sensor ဟာ0.2 secအတွင်းဖုန်းကိုunlock လုပ်ပေးနိုင်မှာကြောင့်လွယ်လင့်တကူနဲ့ ဖုန်းကိုသုံးစွဲနိုင်ပါမယ်။ဆင်းကတ်နှစ်ကတ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင် မယ့်ဟန်းဆက်များကသာနောက်ပိုင်းမှာဝယ်လိုအားမြင့်မားလာတာကြောင့်KENBO ကလည်းFly2ကိုဆင်းကတ်နှစ်ကတ်ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင် အောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။မှတ်ဥာဏ်ပမာဏ အပိုင်းတွင် RAM 3GB နဲ့ROM 32GB ပါရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ ပါရှိတဲ့CPU စွမ်းရည်မှာQuad-core 1.3GHz ဖြစ်တာကြောင့်လျင်မြန်တဲ့တုံ့ပြန်မှု ကိုပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်။Screenshot ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလက်ချောင်း ၃ချောင်းကို အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရုံနဲ့အလွယ်တကူ ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်များနဲ့အခြားSensor စနစ်များလည်းပါရှိပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပိုင်း တွင်WiFiနှင့်Bluetooth တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပြီးUSB စနစ်လည်း ပါရှိတာကြောင့်အချက်အလက်များ လွှဲပြောင်းရယူဖို့အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ပေးမယ့် Network အမျိုးအစားကတော့ 2G,3G,4Gဖြစ်ပါ တယ်။အားသွင်းအသုံးပြုရမယ့်ဘက်ထရီအမျိုးအစားမှာLi-Ion 3000mAh ဖြစ်တာကြောင့်တစ်နေ့တာအတွင်းဖုန်းကိုအချိန်ကြာကြာအသုံးပြုနိုင်ပါ မယ်။
ဖုန်းများကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့အခါတွင်အရောင်ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်း ဟာလည်းသုံးစွဲသူများအတွက်အရေးပါလှပါတယ်။ဒါကြောင့်အချို့ဖုန်း ကုမ္ပဏီများဟာသူတို့၏ဟန်းဆက်များကိုအရောင်ဆန်းများနဲ့ထုတ်လုပ် ရောင်းချတတ်ကြပါတယ်။Fly 2တွင်အရောင်ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့ အတွက် လည်းလှပတဲ့အရောင်၃မျိုးခန့်နဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးထားပါသေးတယ်။
ဟန်းဆက်များဝယ်ယူတဲ့အခါတွင်ထပ်ဆောင်းလက်ဆောင်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဖုန်းကုမ္ပဏီများကသုံးစွဲသူများအားပေးအပ်လေ့ရှိပါတယ်။Fly 2ကိုဝယ်ယူလျှင်Selfie Stick, Phone Cover, OoredooSim Card တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊တစ်လလျှင်Ooredooဖုန်းဘေ၅၀၀၀ ဖြည့်ပြီး အင်တာနက် 2GB ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ၆လကိုအင်တာနက်12GB ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလည်းရှိပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းFly2Smartphone ကိုဝယ်ယူအားပေးမှသာလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအား ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Fly2ရဲ့ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးမှာ၁၅၉,၈၀၀/- ကျပ် ၀န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
♪ “Gionee P8 Max” Price : 189,000 /- ♫
ဆင်းကတ်နှစ်ကတ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ကာ ထောက်ပံ့ပေးမယ့် Network ကတော့2G/3G/4G ပါ။ဖုန်းကိုယ်ထည် အရွယ်အစားပမာဏမှာ154.4x76.6x9.2 mm ဖြစ်ပါတယ်။IPS LCD capacitive touch- screen ရဲ့အကျယ်အ၀န်းပမာဏကတော့5.5 inch ဖြစ်ပါတယ်။
မြင်ကွင်းစွမ်းရည်အတွက်720x 1280 pixels ပမာဏ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး၊တစ်လက်မမှာရှိမယ့်pixel ပမာဏသိပ်သည်းဆ ကတော့267ppi ပါ။Multitouchစနစ်တွင်Amigo 3.2 ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါ မယ်။အဓိက,ကင်မရာဟာ13MP, f/2.2 စွမ်းရည်ရှိပြီး၊ရှေ့ကင်မရာငယ် ကတော့8MP, f/2.2 စွမ်းရည်ပါ။ 1080p စွမ်းရည်နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပါက တစ်စက္ကန့်ကို 30frames နှုန်းရရှိပါမယ်။
မှတ်ဥာဏ်ပမာဏအပိုင်းတွင် RAM 3GB နှင့်ROM 32GB ပါရှိပါမယ်။128GB အထိချဲ့ထွင်အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ ဘက်ထရီ ကတော့Li- Ion 3150mAh ဖြစ်ပါတယ်။
Display : 5.5 inch, IPS LCD Capactive Touchscreen
Memory : 32GB, 3GB RAM , up to 128GB
Phone : 09-30204444 (Phoenix Mobile)
♪ ဖုန်းထဲမှာလည်း ဓါတ်ပုံတွေကို Professional ဆန်ဆန်ပြုပြင်နိုင်မယ့် - Adobe Photoshop Express Premium v3.8.421 Apk (18-Dec) ♫
♪ စာရေးဆရာမဂျူးရဲ့ နာမည်ကြီး စာအုပ် များစုစည်းမူ (55အုပ်) ♫
၁။ ဆုံနေရဲ့နဲ့ လွမ်းလေခြင်း
၁၄။ ပင်လယ်နှင့်တူသော မိန်းမများ
ဂျူး - ပင်လယ်နှင့်တူ သောမိန်းမများ
၁၇။ကြယ်ကြွေတို့ ရဲ့ အတောင်ပံ
၁၉။ ကျွန်မချစ်သောမြို့ 
၂၃။ စောင့်နေမယ်လို့ မပြောလိုက်ဘူး
♪ " ခရစ္စမတ်ကာလမှာ Huawei nova 2i Aurora Blue Color ကို ၀ယ်ယူလျှင် MPT Data Bonus အပြင် 5000 mAh Powerbank ကိုပါ ရရှိနိုင် " ♫
HUAWEI ဟာ nova 2i ကို ပြည်တွင်းမှာ စတင်ကြေညာခဲ့ပြီး Aurora Blue Color ကို ဈေးကွက်ထဲမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ 339,000 ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ HUAWEI nova 2i ဝယ်တဲ့သူတိုင်းအတွက် ဒီခရစ္စမတ်ကာလမှာ 5000 mAh Powerbank နဲ့ MPT Data Bonus တွေပါ ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းငွေ 5000 ကျပ်ငွေဖြည့်သွင်းရင် အပိုငွေ 3000 ကို 12 လတိတိ ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် nova 2i မှာပါရှိတဲ့ အားသွင်းကြိုး၊ အားသွင်းတဲ့ခေါင်း၊ နားကြပ်တွေကိုလည်3းလ warranty ပေးထားပါသေးတယ်။ Huawei Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက " ဒီဖုန်းဟာ ထိပ်တန်းအဆင့် စွမ်းဆောင်ရည်တွေပါဝင်တဲ့ ဖုန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာ 13MP/2MP နဲ့ နောက်ဘက်ကင်မရာကိုတော့ 16MP/2MP စတဲ့ ကင်မရာလေးလုံးပါဝင်တဲ့စနစ် dual-lens cameras ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဆန်ဆန်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်မယ့်အပြင် Camera feature, portrait mode တွေ အများအပြားကိုလည်း သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပါ။
18:9 FullView Display အသုံးပြုထားပြီး 5.9 လက်မရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်အကျယ်၊ Android7Nougat နဲ့ မောင်းနှင်ထားပြီး HUAWEI ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် EMUI Skin ကို သုံးထားမှုနဲ့အတူ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်လည်း 8-core Kirin 659 chipset ကို အသုံးပြုထားတယ်။ သိုလှောင်မှုပမာဏမှာလည်း 4GB RAM နဲ့ 64GB ကို on-board storage အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပေးထားတယ်။ ဘက်ထရီပမာဏကလည်း 3340 mAh ပါရှိတာကြောင့် ဂိမ်းကစားသူတွေနဲ့ ဖုန်းအသုံးများသူတို့အတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ " ဟု ဆိုပါတယ်။
2017 ခုနှစ်မှာဆိုရင် HUAWEI အနေနဲ့ Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲမှာ အဆင့် 88 နေရာ၊ Brand Finance ရဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှတ်တံဆိပ် 500 စာရင်းမှာ အဆင့် 40 နေရာ၊ Interbrand ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အမှတ်တံဆိပ် 100 မှာ အဆင့် 70 နေရာကို ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Fortune မဂ္ဂဇင်းကနေ ထုတ်ပြန်တဲ့ 2017 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Fortune ကုမ္ပဏီ 500 စာရင်းမှာ အဆင့် 83 နေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
♪ " နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများ " (26.12.2017 ၊ အင်္ဂါနေ့တွင် စုစည်းတင်ဆက်သည်။) ♫
1. (AMT Mobile) (15.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPhone X (64GB) Gray - 1580000
iPhone X (256GB) Silver - 1560000
iPhone X (256GB) Gray - 1820000
iPhone732GB Gold - 795000
iPhone7128GB Black - 950000
iPhone7128GB Gold - 930000
iPhone7256GB Jet Blk- 1010000
2. Today Mobile (8.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
3. Unique Mobile (21.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPhone X 64GB Silver / Space Gray - 1,589,000
iPhone X 256GB Silver / Space Gray - 1,829,000
iPhone 8 Plus 256GB Gold / Space Gray - 1409000
iPhone 8 Plus 256GB Silver - 1399000
iPhone 8 256GB Gold / Silver / Space Gray - 1219000
iPhone7Plus (32GB) JetBlack / Black / Rose Gold / Gold - 1029000
iPhone7Plus (128GB) Jet Black / Black / Rose Gold / Gold - 1179000
iPhone7(32GB) Jet Black / Black / Rose Gold / Gold - 849000
iPhone7(128GB) Red / Jet Black / Rose Gold / Gold - 989000
iPhone7(128GB) Black - 979000
iPhone7(256GB) Red - 1089000
iPhone7(256GB) Black - 1069000
4. Win Mobile (26.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPhone X 64GB (Gray, Silver) - 1560000
iPhone X 256GB (Gray, Silver) - 1820000
iPhone 8 (64GB) Gold, Silver - 1030000
iPhone 8 (256GB) (All Color) - 1220000
iPhone 8 Plus (64GB) (All Color) - 1200000
iPhone 8 Plus (256GB) All Color - 1400000
iPhone7(128GB) All Color - 1000000
iPhone7(256GB) JetBlack, Rose, Silver - 1040000
iPhone7(256GB) RED Edition - 1080000
iPhone 6S Plus (32GB) - 77000
iPhone SE 32GB (Gray) - 450000
iPhone SE 64GB - 570000
iPhone 6S Plus (64GB) - 780000 (CPO)
1. Win Mobile (26.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iPad Pro 12.9 512GB 4G (2017) - 1690000
iPad Pro 10.5 256GB WiFi - 1070000
iPad Mini4(128GB) 4G - 770000
1. Unique Mobile (21.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3" [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 1866MHz, 256GB] - USD 1729
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3" [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 1866MHz, 512GB] - USD 1899
New Macbook (Gold, Rose Gold) 13" [1.1GHz Intel Core M3, 8GB LPDDR3, 256GB] - USD 1289
Macbook Air 13.3" [Intel Dual Core i5, 8GB LPDDR3, 256GB] - USD 1129
Macbook Air 13.3" [Intel Dual Core i5, 8GB LPDDR3, 128GB] - USD 939
2. Win Mobile (26.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
iMac 2017 (New) 27" Retina 4K i5 7th 3.4GHz / 8GB RAM / 1TB Fusion - 2170000 (Out of stock)
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Silver / No Touch Bar - 1700000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / No Touch Bar - 1940000 (Out of stock)
Macbook Pro 13" (New) 3.1GHz / 8GB RAM / 512GB / Gray / Touch Bar - 2560000 (Price drop)
Macbook Pro 13" (New) 3.1GHz / 8GB RAM / 512GB / Silver / Touch Bar - 2560000 (Price drop)
Macbook Pro 15" (New) 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB / Grey / Touch Bar - 3070000 (Price drop)
Macbook Pro 15" (New) 2.8GHz / 16GB RAM / 256GB / Silver / Touch Bar - 3070000 (Price drop)
New Macbook 12" 1.2GHz / 8GB Ram / 256GB / Grey [ 2017 New ] - 1730000 (Out of stock)
1. (AMT Mobile) (8.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
2. Unique Mobile (21.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
3. Win Mobile (26.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
LG G6 (H870DS) - 829000 (100,000 Promo)
LG Q6 - 359000
LG Stylus3- 309000
LG K10 (2017) - 229000 (30,000 Cash Back)
LG K8 - 179000 (20,000 Cash Back)
OPPO F5 - 369000
OPPO A71 - 219000
Meizu M6 Note (Ram4/ 64) - 329000
Meizu M6 Note (Ram3/ 32) - 279000
Meizu M6 (Ram2/ 16GB) - 169000
Meizu M6 Note (32GB) - 279000
Meizu M6 Note (64GB) - 329000
Meizu M6 (16GB) - 169000
Meizu M6 (32GB) - 195000
Meizu M6 Note (64GB / 4GB) - 329000
Meizu M6 Note (32GB / 3GB) - 279000
Xiaomi Mi Max2(Ram 4, 64GB) Black - 290000
Xiaomi Mi5X (Ram 4, 64GB) Red - 268000
Xiaomi Mi5X (Ram 4, 64GB) Black, Pink - 245000
Xiaomi Mi5X (Ram 4, 64GB) Gold - 240000
Xiaomi Redmi Note 4X (Ram 4, 64GB) Blue - 223000
Xiaomi Note 5A Prime (4 / 64) Gold - 195000
Xiaomi Note5A Prime (Ram 3, 32) Gray - 163000
Xiaomi Redmi 4A (Ram2/ 32GB) - 128000
Xiaomi Mi 5X (64GB) Gold - 249000
Xiaomi Mi 5X (64GB) Red - 269000
Xiaomi Mi Notebook Air 256GB / 4GB - 850000
Xiaomi Mi Notebook Air 128GB / 4GB - 750000
Xiaomi Redmi Note 5A (32GB / 3GB) - 219000
Xiaomi Mi Max2(128GB / 4GB) - 335000
Xiaomi Mi Max2(64GB / 4GB) Black - 293000
Xiaomi Mi Max2(64GB / 4GB) - 280000
Xiaomi Mi Max2(32GB / 4GB) - 260000
Xiaomi Mi 5x (64GB / 4GB) Red - 270000
Xiaomi Mi 5x (64GB / 4GB) Black / Rose Gold - 250000
Xiaomi Redmi5Plus (4 / 64GB) - 273,000
Xiaomi Redmi5(3/32GB) Gold - 200000
Xiaomi Redmi5(2/16GB) Gold - 180000
Xiaomi Redmi 5A (16GB / 2GB) - 115000
Xiaomi Redmi Note 5A (32 / 3GB) - 162000
Xiaomi Redmi Note 4X (64GB / 4GB) Blue SD - 225000
Xiaomi Redmi Note 4X (32GB / 3GB) Miku / Blue - 190000
Huawei GR5 2017 - 259000
Huawei Nova2i New - 339000
Huawei P10 Plus (64GB) - 799000
Huawei P10 (64GB) - 599000
Huawei Nova 2i - 339000
Huaei Enjoy6- 149000
Huaei Enjoy7- 149000 (New Model)
Huawei GR5 Mini (Gold / Silver) - 1175000
Huawei Y6II Prime - 190000
Huawei y5 (2017) 3G - 129000
Huawei T3 8" - 185000
Huawei Honor 8 Lite - 199000
1. Today Mobile (8.12.2017) ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။
Asus Zenfone4(Black) - 658000
Ubiquam U 800 - 80000
♪ ၁၅၉,၈၀၀/- ကျပ် ၀န်းကျင်သာကျသင့်မယ့် - “KENBO Fly...
♪ စာရေးဆရာမဂျူးရဲ့ နာမည်ကြီး စာအုပ် များစုစည်းမူ (...
♪ " ခရစ္စမတ်ကာလမှာ Huawei nova 2i Aurora Blue Color...
♪ " နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများ " (26.12.2017 ၊ အင်္ဂါနေ...
♪ " Vivo မှ V7 နှင့် V7+ ၀ယ်ယူသူများအတွက် Cash Bac...
♪ “အမေးများသော မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ” ♫
♪ ဖုန်းအချင်းချင်းဖိုင်များ Share ရာမှာအမြန်ဆန်ဆုံ...
♪ နည်းပညာမြင့်မားသော ရေစိုခံအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း - ...
♪ " နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများ " (19.12.2017 ၊ အင်္ဂါနေ...
♪ " LG G7 မှာ အဆင့်မြင့်မျက်လုံး အာရုံခံစနစ် ပါဝင်...
♪ " ယခုလ 21 နှင့် 22 ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မ...
♪ Internet Download Manager v6.30 Build2Full Cra...
♪ Solid Explorer File Manager v2.3.1 Apk ♫
♪ “Top 10 Phones of 2017: Best Battery Life” ♫
♪ New Year Edition အတွက် မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ OPPO R11s ♫
♪ Android မှာ စာလုံးပေါင်းနဲ့ Grammar မှန်မမှန်စစ်...
♪ Xiaomi Mi A1 အတွက် Special Edition Red ကို ရောင်...
♪ ဘတ်ဂျက်ဖုန်းတစ်လုံးလို့တောင်ထင်ရက်စရာမရှိတဲ့ Hon...
♪ Panasonic က ကျပ် ၁၅၀ ၀၀၀ ၀န်းကျင်တန် တန်ဖိုးနည်း...
♪ ၂၀၁၈ မှာ Meizu စမတ်ဖုန်းသစ် ၆မျိုးကို မိတ်ဆက်သွာ...
♪ " Screen အောက်တွင် Fingerprint Scanner ပါဝင်သော ...
♪ " ကင်မရာလေးလုံးနဲ့ Full View Display ပါဝင်သည့် N...
♪ Discs ဗီဒီယို format ကို ဒစ်ဂျစ်တယ် format အဖြစ်...
♪ Root လုပ်စရာမလိုဘဲ MIUI ဖုန်းတွေမှာ မလိုချင်တဲ့ ...
♪ Passport Photo Free (iOS) ♫
♪ M-Pitesan(M-ပိုက်ဆံ) အသုံးပြုသူများအတွက် ငွေသားက...
♪ Unlimited Hack ထားတဲ့ - Candy Crush Jelly Saga v...
♪ " နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများ " (12.12.2017 ၊ အင်္ဂါနေ...
♪ " Vivo V7 နဲ့ V7+ တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်များ " ♫
♪ Advanced Systemcare Ultimate v10.1.0.91 + Patch ♫
♪ Internet Download Manager ကို Completely ဖြစ်အော...
♪ Internet Download Manager v6.30 Build 1 Full Ver...
♪ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ စကရင် အကောင်းဆုံး ဖုန်းများ ♫
♪ OnePlus က ၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲအတွက် လျှော့ဈေးမ...
♪ ထွက်ရှိဖို့ နီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ Nokia6(2018) ဖု...
♪ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ display အမျိုးမျိုးအကြောင်း ♫
♪ ဘာ app မှမလိုဘဲ YouTube ကနေ ဗီဒီယိုတွေတိုက်ရိုက်...
♪ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနှုန်းမြန်လာမယ့် Google Chrome နောက်...
♪ iPhone တွေမှာသုံးတာကြာလာတဲ့အခါ နှေးသွားရတဲ့အကြော...
♪ Xiaomi ရဲ့ စမတ်ဖုန်းအားလုံးထဲမှာ ကင်မရာအကောင်းဆံ...
♪ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပြီး မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ - CM Br...
♪ 6-inch display ကင်မရာ၎လုံးနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ Huawei...
♪ ရေစိုပျက်စီးသွားတဲ့ဖုန်းကို ဘယ်လိုပြင်မလဲ?? ♫
♪ LG K8 (2017) ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း ♫
♪ AVG PC TuneUp v16.76.3.18604 + Key ♫
♪ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းများ ♫
♪ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်တော့များ ♫
♪ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး တက်ဘလက်များ ♫
♪ ဖုန်းအသစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် ထည့်စဉ်းစားရတော့မယ့် ASUS ...
♪ Uninstall Tool v3.5.4 Build 5566 Full Patch ♫
♪ ဒေတာအသုံးပြုမှုကို သက်သာစေမယ့် app တစ်ခု Google မ...
♪ iPhone X ရဲ့ Animojis ကို Android မှာ အသုံးပြုနည...
♪ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုတာ??? (တတိယပ...
♪ Wondershare Data Recovery v6.6.1.0 Full Crack ♫
♪ စာသင်သားများအတွက် လုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာ ♫
♪ ဖုန်းထဲလုပ်ဆောင်သမျှတွေကို Video Screen ဖမ်းယူနိ...
♪ Network Profile Name ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ ♫